mujeer အောက်တိုဘာလ 14, 20170မှတ်ချက်များ
ဖေါ်ပြချက်: အလယ်ခေတ်စစ်တိုက်ပွဲများစိတ်ကူးယဉ်: စစ်တိုက်အမာရွတ်များ!
အလယ်ခေတ်စစ်တိုက်ပွဲများစိတ်ကူးယဉ်: စစ်တိုက်အမာရွတ်များ - အလယ်ခေတ်ကသူရဲဆန့်ကျင်နယ်ပယ်နှင့်တိုက်ပွဲအပေါ်ခြေလှမ်း. အနိုင်ရမှမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တိုက်ခိုက်ရေးလေ့ကျင့်မှုလုပ်တာလဲ Apply. ဒီစိတ်ဝင်စားဖွယ်အန်းဒရွိုက်ဂိမ်းထဲမှာအတိတ်ရာစုနှစ်များစွာ၏စစ်သည်တော်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းကြည့်ပါ. အမျိုးမျိုးသောဇာတ်ကောင်အကြားကိုရွေးချယ်ပါ, ထိုကဲ့သို့သောနိုက်အဖြစ်, Barbarians, နင်ဂျာများနှင့်အခြားသူများ. တစ်ခုချင်းစီကိုသူရဲကောင်းတစ်မူထူးခြားသောစစ်တိုက်စတိုင်နဲ့မတ်မတ်ရှိတယ်. စမ်းသပ်ခြင်းဓား, ပုဆိန်, katanas, အဆိုပါတိုက်ပွဲများအတွင်းဒိုင်းနှင့်အခြားအအေးလက်နက်များ. Apply destructive combos which will let you crush any opponent and winaduel.
Lots of lethal weapon types related to medieval war: naginata, wakizashi, axe, cudgel, polearm, warrior blade, စသည်တို့ကို.
အားကစားပြိုင်ပွဲ	\_, famous medieval wars, medieval army composition, medieval military units, medieval soldier ranks, medieval warfare facts, medieval warfare history, medieval warfare weapons, types of medieval soldiers	bookmark
ယခင်အပိုဒ် PC ကွန်ပျူတာစာ Booster ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးအင်စတောလုပ် (WINDOWS တွေ 7,8/10 သို့မဟုတ် Mac)
next ကိုပုဒ်မ 50+ SUPER အံ့သြစရာဘက်ထရီချွေတာ Android apps